"Isla que no hay": Indlu yaseIguana ekufutshane nolwandle - I-Airbnb
"Isla que no hay": Indlu yaseIguana ekufutshane nolwandle
Samara, Guancaste, Costa Rica
Indlu yethu inamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye eligcweleyo, kwaye inokonwabisa abantu aba-4. Ime kufutshane nolwandle kunye nombindi wedolophu, kodwa kwindawo ezolileyo kakhulu apho unokubona iinkawu, i-iguana, kunye neendidi ezininzi zeentaka nezityalo.Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle likuvumela ukuba ukonwabele ubutofotofo bekhaya ngelixa useholideyini. Iqula ekwabelwana ngalo likunika enye indawo yokuphola, kanye kwiyadi yakho yangasemva.
Le ndlu ikwindawo enoxolo yaseSamara, enemibono yasehlathini kunye nendawo ephumlayo, kodwa isekumgama wokuhamba ukuya elunxwemeni nakumbindi wedolophu. Kufuphi nekhaya unokubuka intaphane yeentlobo zeentaka, kunye nequngequ, iiiguana, iinkawu, iicoati, amahashe kunye namabhabhathane. Indlu ikumgangatho ophezulu, inebalcony kunye nemibono emihle yehlathi.
Amagumbi okulala amabini abanzi, ngalinye linebhedi ephindwe kabini kunye ne-air conditioning. Igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawa yamanzi ashushu kunye nomatshini wokuhlamba. Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle elinesikhenkcisi esipheleleyo, isitovu, imicrowave, umenzi wekofu, iblender, i-oveni yetoaster, nokunye. Kukho iTV kwindawo yokuhlala/yokutya enentambo, kunye ne-wifi enesantya esiphezulu ibandakanyiwe.
Indlu ikwindawo ezolileyo yosapho evalelwe ehlathini, ukanti kufutshane nombindi wedolophu kunye nolwandle (imizuzu eli-10 ngeenyawo, imizuzu emi-2 ngemoto).
Mi sono trasferita in Costa Rica nel 2015 con mio marito e mio figlio adoriamo il mare, la natura e la nutella. Ci piace molto viaggiare e conoscere culture diverse dalle nostre.…
Sisoloko sikhona ukunceda iindwendwe zethu, ukunika iingcebiso, kunye nokubakhapha kukhenketho oluncinci lwemimandla engabamelwane ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo. Ababuki zindwendwe bahlala kwindawo.